NamasteNEPALI.com: काखी गन्हाउँछ ? यी हुन सक्छन् मुक्ति पाउने उपाय
काखी गन्हाउँछ ? यी हुन सक्छन् मुक्ति पाउने उपाय
एजेन्सी – गर्मी मौसम पनि सुरु भइसकेको छ । यो समयमा अत्यधिक पसिना आउने समस्यासँगै काखी गन्हाउने गर्छ । यो समस्याका कारण कतिपयलाई सार्वजनिक स्थल वा कार्यलयमा बस्दा समेत ठूलो समस्या पर्ने गरेको छ । तर, काखी गन्हाउँछ भन्दैमा नआत्तिनुहोस् । किनकी यसका समाधान पनि छन् । काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने उपाय यस प्रकार छन्ः
काखीमा पसिना आएपछि ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुन्छन् र त्यसको दुर्गन्ध शरिरभर फैलिएर समग्रमा शरिर नै गन्हाउँछ । हाम्रो शरिरको कुनै पनि अंगमा आउने पसिनालाई रोक्न सकिँदैन किनकी पसिना आउनु पनि एउटा नियमितता हो । तर यसबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट बच्न गर्मी मौसममा कम्तिमा एकपल्ट नुहाउने गर्नुपर्छ । विशेगरी एन्टिब्याक्टेरिया साबुनको प्रयोग गर्नुपर्छ । हावा छिर्ने (प्राय कटन र फाईबर)का लुगा लगाउनुपर्छ । पसिना नसोस्ने तथा छालामा पनि अशर गर्ने भएकोले गर्मी मौसममा सिन्थेटिक्सयुक्त कपडा लगाउनुपर्छ ।
- स्वास्थ्य खबरपत्रिका
Labels: HEALTH, NEPAL, NEWS, USEFUL